Yaraynta Gawaarida ladilay Xilligan Fasaxa: 8 Tilmaamood Oo Saamayn Ku Yeelanaya Iibka | Martech Zone
Yaraynta Gawaarida ladilay Xilligan Fasaxa: 8 Tilmaamood oo Saameyn Ku Yeelanaya Iibka
Arbacada, December 14, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Bloom Curt
Waxaan dhawaan daawaday a video Maamulaha Bartilmaameedka oo taagan isbaaradiisa, isagoo khudbad xasaasi ah u jeedinaya shaqaalihiisa ka hor inta uusan albaabka u furin dadka dukaameysanaya ee jimcaha madow, isagoo isu keenaya ciidamadiisa sidii inuu u diyaarinayo dagaal.
Sannadkii 2016, jahwareerkii Jimcaha Madoobaa wuu ka weynaa sidii hore. In kasta oo dadkii wax iibsanayey ay ku bixiyeen iskucelcelis $ 10 ka yar sidii ay sameeyeen sanadkii hore, waxaa jiray seddex milyan oo dheeraad ah oo dukaameeysanayay Jimcaha Madoow sanadkii 2016 marka loo eego sanadkii 2015, iyagoo wada $ 3.34bn (koror ah 33%) iibka.
Si kastaba ha noqotee, si naxariis leh shaqaalihii ay ahayd inay naftooda u adkeeyaan go'doominta, tiro badan oo dukaameysato ah ayaa doortay inay wax ka iibsadaan khadka tooska ah, halkii ay ka iibsan lahaayeen lebenka iyo dukaamada hoobiyeyaasha. In 2015, qaar ka mid ah 103 milyan oo qof ayaa iibsaday khadka tooska ah intii lagu jiray Black Friday, marka la barbar dhigo 102 milyan oo dukaan ku yaal. Sannadkan, isbeddelkani wuxuu noqday mid aad u muuqda, in ka badan 108 milyan oo wax iibsadayaal ah ayaa wax ka iibsanaya khadka tooska ah, iyo 99.1 milyan oo dhiirrigelinaya gorgortanka shaqsi ahaan sida ku xusan NRF.
Gaar ahaan, moobiilku wuxuu u soo ifbaxay inuu yahay guuleyste Black Friday 2016, iyadoo tafaariiqleyda ay ka mid yihiin Amazon, Walmart, iyo Target ay ka warbixinayaan maalinta ugu mashquulka badan ee taraafikada moobiilka. Xitaa kahor intaanay jimcaha dhamaan, tafaariiqlayaashu waxay soo sheegeen rikoor $ 771 million dakhliga ka soo gala qalabka # mobile
Wanaagsan, sicirka beddelka ayaa lagu soo waramayaa inuu haysto kordhay 16.5% laga soo bilaabo 2015, iyada oo heerarka ka tagaya gawaarida ay hoos u dhaceen 3%. In kasta oo aad u maleyn karto inay tani sabab u tahay inaad kala baxdo barnaamijka 'Prosecco' oo aad ugu hambalyeyso naftaada shaqo si fiican loo qabtay, aragti ayaa loo baahan yahay: sanadka 2016, tafaariiqleyda ayaa wali lumiyay 69% ee dukaameeysatada Black Friday ee internetka ee ka tagay iibsashadooda.
Ma jiro urur jecel inuu lacag kaga tago miiska, iskuna dayo inuu soo celiyo waxay soo bandhigeysaa tartan ka dhan ah waqtiga - ka dib oo dhan, ma ahan macaamiil badan oo u badan inay sii wadaan iibsashada qaaliga ah marka Black Friday ay dhaafto. Intaa waxaa sii dheer, qaar ka mid ah dhiirigelinta caadiga ah ee dhimista laguma dabaqi karo tusaalahan. Iyadoo maskaxda lagu hayo, halkan waxaa ku yaal tilmaamo dhowr ah oo ku wajahan soo kabashada gaariga inta lagu jiro xilligan Fasaxa.
Caqli yeelo: Barnaamijka suuq-geynta waqtiga-dhabta ah waa inuu noqdaa barta aad ka bilaabaneyso. Tikniyoolajiyaddan, tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhisto emayllo leh 'smart blocks' - qaybo ka mid ah waxyaabo shakhsi ahaaneed kuu oggolaanaya inaad geliso boorar, tirinta saacadaha, talooyinka gaarka ah iyo caddeynta bulshada ee fariintaada soo kabashada kicisay.
Raadinta waqtiga-dhabta ah: Waqtigu waa aasaaska, awood u lahaanshaha kormeerka ka tagida gawaarida sida ay u dhacdo waa muhiim. In kasta oo hababka qaarkood ay qaadan karaan waqti in lagaa digtoonaado ka tegista (sugitaanka kalfadhi inuu waqtiga ka baxo, tusaale ahaan), adeegso softiweer la socon kara ka tagista waqtiga-dhabta ah, isla markiiba kicinaya emayl soo kabasho ah oo ay ku jiraan waxa ku jira dambiishooda.
U fududee soo noqoshadooda: Haddii aad rabto macaamilka inuu soo laabto, u fududee iyaga. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin gaadhigooda, oo ay ku buuxsan yihiin muuqaal soo jiidasho leh oo ku saabsan alaabtooda, iyada oo aan la sheegin, sidoo kale sidoo kale waa in ay jirtaa wicitaan ficil ah oo si dhakhso leh ugu soo celin doona safarkii macaamilka si ay uga soo qaadaan meeshii ay ka tageen
Ka dhig mid shaqsiyeed: Xusuusin xusuus leh oo salaan shakhsi ah iyo / ama talooyin shakhsi ahaaneed oo lagu kabayo gawaaridooda ma noqon karto kaliya inay dib u soo celiyaan laakiin sidoo kale waxay dhiirigelinayaan iibsashada dareenka dheeraadka ah.
Abuur dareen degdeg ah: Haddii fikirka malaayiin kale oo dukaameeysato ah isla mar ahaantaana raadinaya gorgortan uusan ku filneyn dhiirigelinta iibsiga, emayl soo-kabasho ah oo muujinaya heerarka saamigaaga hadda jira ayaa hakin kara guriga dhabta ah.
Xusuusi iyaga sababta ay u leeyihiin dhadhan fiican: Dukaameehu miyuu lahaa fikir labaad? Ku xooji go'aankooda shahaado macmiil wanaagsan ama dib u eegista isticmaaleyaasha si ay uga caawiso inay iyaga dib ugu dhiirigeliyaan.
Noloshooda u fududee: Kharashka bixinta lama filaanka ah ayaa badanaa lagu sheegaa inay sabab u yihiin ka tagitaanka gaariga - kharashka boostada ee aadka u weyn ayaa joojin kara dalab Fasax ah oo aad u badan oo ah wax iibsi. Sidaas oo ay tahay, farriinta ka soo kabashada gaadhigu waa fursad wanaagsan oo lagu xasuusinayo dukaanleyda wixii guji ama ururin ama xulashooyin kale oo aad ku bixin karto.
Ka saar wixii shaki ah: Fursad lagu keydsado lacag, jahwareerka kicinta ayaa ka sarreyn doona sida caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, dabacsanaan waxay si dhakhso leh ugu horseedi kartaa qoomamo iyo ka tagid ka hor iibsashada. Sii kalsooni farriin soo-kabasho ah oo tilmaamaysa siyaasadda soo-celintaada, wixii lacag celin ah oo dammaanad-qaad ah ee aad bixiso iyo haddii aad lacag-la'aan ku bixiso.
Marka laga eego aragtida macaamilka, way fududahay in loo damqado qaar ka mid ah sababahooda suurtagalka ah ee dammaanadda looga iibinayo iibka. Waqtiga (oo si dhakhso ah u sii yaraanaya heerarka keydka) iyaga ka soo horjeedka ah, baahida loo qabo fududaynta, habka degdegga ah ee xaddidan ee lacag-la'aanta ah ayaa muhiim ah. Bogaggaas oo u baahnaa koodh gaar ah oo Jimcaha Madow ah, oo si fudud u codsan kara una arki kara natiijooyinka qiima dhimista (oo ay weheliso qarashka bixinta) ka hor inta aan la gaadhin heerka lacag-bixinta ayaa samayn kara ama jebin kara beddelaad.
Sidoo kale, waxaa loo baahan yahay habsami u socodka howlaha diiwaangelinta. Iyada oo macaamiisha ay u badan tahay inay booqanayaan goobo aysan horey u soo marin, maqnaanshaha 'jeegga martida', ama wajahaya foom dheer si loo buuxiyo ka hor inta aan la isku deyin qabashada MacBook Pro ugu dambeeyay wuxuu abuurayaa caqabad weyn.
Nidaamka wax lagu iibsado ee loo xardhay loona fududeeyay inuu ahaado mid culeys la'aan miisaska, kiniiniga ama moobiilka, oo lagu buuxiyo qalab kabashada gaariga oo si buuxda u qalabaysan, wali waxaad haysataa waqti aad si togan ugu saamayso iibka ka hor sanadka.
Tags: 2016jilicsan madowdukaameeysatada jimcaha madowbuluugleben iyo hoobiyeiibsashada khadka tooska ahproseccodukaano
Curt Bloom waa Madaxweynaha BlueVenn US, oo ah bixiyaha softiweerka suuq geynta ee kanaalka badan. Curt wuxuu horey uhelay jago hogaamineed oo weyn smartFOCUS wuxuuna udub dhexaad u ahaa kobaca ganacsiga ee aduunka. Tan iyo markaas, Curt wuxuu la shaqeynayay dhowr shirkadood oo Mareykan ah oo bilaabaya, meelaha warbaahinta bulshada, kaqeybgalka macaamiisha waqtiga-dhabta ah iyo falanqaynta. Maaddaama uu yahay Madaxweynaha howlaha BlueVenn ee Mareykanka, Curt wuxuu kormeerayaa ballaarinta BlueVenn ee Mareykanka oo dhan wuxuuna madax u yahay kooxda maamusha macaamiisha Mareykanka ee BlueVenn.
5-da Qalad ee ugu Muhiimsan ee laga Fogaado Qalabaynta Suuqgeynta
Waze Local: Wadayaasha Waze Ha U Arkaan Meheraddaada Markay Joogaan